I-5 yeyona mikhankaso igqwesileyo yentengiso | Abadali be-Intanethi
I-5 yamaphulo angcono kakhulu entengiso
UMary Rose | | Ezahlukeneyo
Ukonwabisa kunye nokonwabisa umthengi yeyona nto uninzi lwamaphulo eentengiso afuna ukufezekisa, kuba ukuba bafezekisa oku, kuya kuba nethuba elikhulu lokuba iphulo liphumelele. Kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba iphulo lihlala likwinkumbulo yomthengi, kuba iya kusazisa ukuba ibe nempembelelo entle kuye.
Ngenxa yesi sizathu, kweli nqaku siqokelela I-5 yamaphulo angcono kakhulu entengiso ukuba ngokuqinisekileyo ugqiba ukukhumbula ixesha elide.
1 I-5 yamaphulo angcono kakhulu entengiso
1.1 Jube: Ubuhle nyani
1.2 Volkswagen: “Cinga kancinci”
1.3 Uloliwe waseMelbourne: Iindlela eziziziyatha zokufa
1.4 Heineken: “Molweni nonke”
1.5 Inkunzi ebomvu: Stratos
Ngaphambi kokuba sikubonise imizekelo esiyikhethileyo, sinokuthi olu khetho lusekelwe kwimpembelelo eyenziwe ngala maphulo, kuba amanye awo. bawongwa njengabona babalaseleyo embalini, abanye baphula iinkolelo kunye nemigangatho yentlalo kwaye abanye bophula iirekhodi zehlabathi..
Apha sijonga kwi-5 yezona zibalaseleyo. iiprogram zokukhangisa idalwe kude kube namhlanje.
Jube: Ubuhle nyani
I-Stereotypes zakhiwo zentlalo, oko kukuthi, zidalwe luluntu, ngoko ke ngendlela efanayo ezinokudalwa ngayo, zinokupheliswa, nangona zifuna umgudu omkhulu. Ngenxa yazo kuvela imisinga efuna ukwahlukana neengcinga ezisetyenziswayo kunye nokuchukumisa uluntu, ngokuqhelekileyo kusetyenziswa ingxabano yeemvakalelo. Eyona nto ibalulekileyo kolu hlobo lwangoku lunyango olwahluke kakhulu alunika amabhinqa. Ingqikelelo yobuhle bendabuko kunye nobuhle buguquka kwaye bugqithise. Kwezi meko, ngabasetyhini abanelizwi kunye nevoti kwizigqibo zabo, babonisa ukuba "abafezekanga" kwaye abanalo uxolo.. Bayakuphepha ukudibanisa impumelelo yabasetyhini kunye nokubonakala kwabo ngokomzimba, ngoko babonisa imodeli yowesifazane ophumelelayo kunye nokuzimela.
Ezi zibhengezo zibonisa umzekelo ocacileyo wokuziphendukela kwemvelo ekufuneni ukulingana ngokwesini. I-Dove yenye yeempawu zoovulindlela ekusebenziseni lo mthombo, abakhuseli abathembekileyo beentlobo ezahlukeneyo, babonisa abafazi bokwenene nabanamandla. Ukusukela ekusungulweni kwegama labo ngo-1957, basebenze noluhlu olubanzi lwabasetyhini, bobabini ukubalisa amabali abo kunye nokuthengisa iimveliso zabo kunye nendlela esibona ngayo ubuhle bokwenyani. Umzekelo woku kwakungo-2004 xa babesungula iphulo lobuhle boBunene. Itshantliziyo lenguquko kweli shishini ngelo xesha, lalibonisa amabhinqa awayephelisa iingcamango zobuhle. Injongo yakhe yayikukukhulisa ukuzithemba kwabasetyhini ngokubonisa iifoto ezingashicilelwanga ngokuzithemba kunye nobuhle babo bendalo.
Volkswagen: “Cinga kancinci”
Kwiminyaka elishumi elinesihlanu emva kweMfazwe Yehlabathi II, iUnited States, elinye lamazwe anamandla ehlabathini, yaba lilizwe elithengayo. Ngoko baqalisa ukwakha iimoto zeentsapho ezinabantwana. Eli phulo lelinye lawona adumileyo kwimoto yohlobo lweVolkswagen. Umbhalo wephulo wenziwa kwi-1959 nguJulian Koening we-arhente ye-Doyle Dane Bernbach. Eli phulo lasimema ukuba sicinge ngemoto njengendlela yokuthutha, kungekhona njengento yesimo. CNgenjongo yokukhuthaza imodeli entsha yeVolkswagen Beetle, imoto ehlangeneyo. Intsimbi yaba yimpumelelo kangangokuba yanceda ukwenza uQoqongqothwane ube yimpumelelo kwezorhwebo.
Ngelo xesha, izibhengezo zeenqwelo-mafutha zazigxininise kakhulu ekunikezeni ulwazi oluninzi kangangoko malunga nemveliso kunokukholisa umthengi ukuba ayithenge. Ukongeza, babenendlela ejolise ngakumbi kwifantasy kunenyani.
Uloliwe waseMelbourne: Iindlela eziziziyatha zokufa
Iguqulelwe kwisiNgesi njenge "Iindlela ezisisidenge zokufa", yayiliphulo lentengiso elenziwe yi-arhente yeMcCann Melbourne. Yaphuhliselwa oololiwe beMetro, uthungelwano lwezothutho lukaloliwe eMelbourne (Ostreliya). Injongo yeli phulo yayikukukhuthaza ukhuseleko lwabantu abasondela kwiziporo zikaloliwe. Eli phulo libe yimpumelelo kwihlabathi liphela, ngenxa yevidiyo yalo yomculo. Okwangoku ineembono ze-228 yezigidi kwi-Youtube. Abalinganiswa abakwividiyo babemele iindlela zobuyatha zokufa njengokugcina inyoka efuywayo, ukuma emphethweni weqonga likaloliwe, okanye ukunyathela phezu koololiwe ukuze utshintshe amaqonga endaweni yokusebenzisa izinyuko.
Eli phulo ligxile kumaphephandaba, unomathotholo, intengiso yangaphandle, kunye neewebhsayithi zokunxibelelana. Naye bafuna ukutsala umdla woluntu ukuba kude kube ngoko belungenamdla kumaphulo okhuseleko ezindleleni.
Heineken: “Molweni nonke”
Eli phulo lilawulwa yiMegaforce kwaye liveliswe yi-Iconoclast Paris. Ngale ndawo yorhwebo, Heineken, wayefuna ukushiya ngasemva ucalucalulo malunga nokukhetha kwemveliso yakhe, kuba abahluleli kwaye bakhuthaze ukuba umthengi ngamnye akhethe. Ngale nto, bafuna ukuveza ukuba ukusetyenziswa kwebhiya yabo edumileyo akwahluli phakathi kwesini okanye i-stereotypes.
Kwividiyo unokubona iimeko ezahlukeneyo, apho abalindi bakhonza khona abafazi ngendlela engafanelekanga, kuba ngabo abayalele ubhiya. UHeineken ufuna ukwaphula ezo nkolelo. Kanye njengokuba abafazi benokuba nebhiya, amadoda anokuba ne-cocktail. Heineken ukuzibophelela kwinkululeko yokuzikhethela yomntu ngamnye, kwaye kungekhona ngenxa yomfanekiso uluntu olunawo malunga noko kufuneka likuthathe ngokwesini okanye stereotype.
Inkunzi ebomvu: Stratos
Umthombo: Red Bull
Bomvu inkunzi Istratos es una kwinkampuan / A kawonke wonkeitaria Lanzada en el 2010 yi la empuhambo de beibhidias amandlaéTicas Bomvu inkunzi. Eli phulo lalifuna ukukhuthaza ukutsiba kwestratospheric kaFelix Baumgartner, quKulungile el 14 de uOCTubre de 2012 se guqulairtió en el kuqala ukuba umntuo en yeneneizar un salukuba desde una yonke intoura de 39 keelówahlanganaros. La kwinkampuan / A kwakunjalo un éxIto en tisizameos de kawonke wonkeinto, ya que Baumgardphantsi se guqulairtió en una bhiyozelainto iyunifomui-ial y el salukuba kwakunjalo Litholeiengalunganga yi Los mediOS de comunicAngleivuliwe de ukubado el iyunifomuo.
Eli phulo ejolise ekuboniseni ukuba imveliso yeRed Bull iphucula ukusebenza komzimba kunye nengqondo. Eli phulo likwazile ukuba lelinye lawona maphulo agqwesileyo okuthengisa kunye neentengiso kwimbali, kunye nokudala enye yezona ziganeko zemidlalo ezinkulu ze-2012.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-5 yamaphulo angcono kakhulu entengiso
Izakhelo zeWordPress zasimahla
Hlanganisa umfanekiso omnye nomnye kwiPhotoshop